Gbasara Anyị - Huaian Junbao Hydraulic Machines Co., Ltd.
Nnọọ na Jiangsu Huaian Junbao Hydraulic Machinery Co., Ltd. Anyị bụ ndị ọkachamara na-arụpụta valvụ nchịkwa akara valvụ, valvụ njikwa hydraulic valve, valvụ spool valvụ, mgbali elu-n'ọtụtụ ọdụ ụgbọ mmiri na wdg. Anyị nwere ike ịnye P40 Series, P80 Series, RD5200 Series, SD WAVOIL Series, DCV Series, ZD Series, CDB Series na ndị ọzọ si na 30L / min ruo 400L / min, nrụgide sitere na 16Mpa ruo 50MPa na nnukwu mbufe mgbali elu ọzọ. , A na-etinyere ngwaahịa ndị a metụtara ọrụ ugbo, ihe owuwu, mmanụ, azụ, ịkụ ala na ụlọ ọrụ ndị ọzọ.
Anyị abụrụla onye isi na ụlọ ọrụ ahụ. Anyị na-enyefekwa oge niile na ịchepụta, na-eme nchọpụta, na-emepụta ngwaahịa ọhụrụ dabere na ahịa na arịrịọ ndị ahịa anyị.Ngwaahịa anyị ebupụlarị na Ndịda Ọwụwa Anyanwụ Eshia, Australia, Middle East, Africa na Latin America na wdg earned nwetawo aha ọma na ngalaba a.
Anyị ga-aga n’ihu n’ihu ịkwalite sistemụ azụmaahịa anyị na sistemụ ịre ahịa mgbere, ka anyị nwee ike ịnye ndị ahịa nọ ọrụ ahụ ezigbo plọlụ pool na pịamị gia nke ọma, na-akwado ọrụ anyị kacha mma. Anyị na-eme ike anyị niile iji gboo ihe ndị ahịa anyị chọrọ.
Anyị bụ isi mmalite gị zuru oke maka ngwaahịa dị mma yana ọrụ na-arụ ọrụ gbakwunyere awa 24 kwa ụbọchị.